Dowlada Talyaaniga oo shaaca ka qaatay in ay raneyso xiraneyso Muhaajiriinta – Balcad.com Teyteyleey
Talyaaniga ayaa ku hanjabay inuu u diidi doono maraakiibta dalalka shisheeye leeyihiin in ay ku dejiyaan dekadihiisa dadka muhaajiriinta ah.
Hadalkani wuxu ku soo baxay warqad uu danjiraha Talyaaniga u fadhiya Midowga Yurub, Maurizio Massari, uu digniin ah in xaaladdu noqontay haatan mid “aan la sii wadi karin” ku siinayey Midowga.
Ra’isal Wasaare Paolo Gentiloni ayaa isna ku eedeeyey qaramada Yurub in “ay isha ka lalinayaan” duruufaha taagan.
Qiyaastii 2000 oo qof ayaa ku dhintay ama la la’yahay oo loo malaynayaa in ay ku qarraqmeen badda, hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga yaa iyaduna sheegtay in dadka badda isku biimaynaya badankoodu ka dhoofaan dalka Liibiya.
The post Dowlada Talyaaniga oo shaaca ka qaatay in ay raneyso xiraneyso Muhaajiriinta appeared first on Ilwareed Online.